Somaliland oo si weyn uga soo horjeesatay isbaheysiga looga dhawaaqay Sacuudiga - Caasimada Online
Home Warar Somaliland oo si weyn uga soo horjeesatay isbaheysiga looga dhawaaqay Sacuudiga
Somaliland oo si weyn uga soo horjeesatay isbaheysiga looga dhawaaqay Sacuudiga
Hargeysa (Caasimadda Online) – Maamulka Somaliland ayaa maanta shaaciyey in uusan aqoonsaneyn isbaheysiga Carabta iyo Afrika ee Isniintii looga dhawaaqay Riyadh, caasimadda Sacuudiga.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland ayaa lagu sheegay in sababta ay u diideen golahaas ay tahay in aanan laga talo-gelin.
Somaliland ayaa qoraalka ku sheegtay inaysan marnaba wada shaqeyn la yeelan doonin wadadmada ku teedsan Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ilaa inta laga aqoonsanayo gooni isku taageeda.
“Somaliland waa dal madax bannaan dal kale uma daba fadhiisanayso Xuduudaheeda Badeed” ayaa lagu yiri qoraalka.
Somaliland ayaa ku dhawaaqday madax banaani sanadkii 1991-dii, illaa hadda ma aysan helin hal wadan oo aqoonsado, waxaana loo arkaa Maamul Goboleed kamid ah dalka Soomaaliya.
Halkaan hoose ka akhriso warka kasoo baxay Somaliland